काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन प्रक्रिया शुरु, निर्वाचन अधिकृत खटाइँदै — Breaking News, Headlines & Multimedia
काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन प्रक्रिया शुरु, निर्वाचन अधिकृत खटाइँदै
नेपाली काँग्रेसले एक/दुई दिनमा क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूचीका साथ सबै जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खटाउने भएको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद छिनोफानो भएसँगै १४औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरू खटाउन लागिएको हो ।
पार्टीबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गठित निर्वाचन समितिका संयोजक कानूनविद् महादेव यादवले ढिलामा पनि आउँदो शुक्रबारसम्म सबै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची र जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खटाइने जानकारी दिनुभयो । विवाद समाधान गर्न बाँकी रहेका केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता सूची र जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खटाउन थप एक/दुई दिन समय लाग्न सक्ने जनाएको छ ।
यसैबीच काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पार्टीसितको समन्वयमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ । जिल्ला जिल्लामा पुगेका निर्वाचन अधिकृतले पार्टीसितको सल्लाहमा मतदान अधिकृत खटाउने छ । उहाँले क्रियाशील सदस्यतालगायतका पार्टीभित्रका विभिन्न समस्याको छिनोफानो भएकाले अब महाधिवेशन सहज तरिकाले अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनका लागि अब सबै बाटो खुला भएको उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच पार्टीका केही नेताले क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका जिल्ला सभापतिहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डा. शेखर कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चित्रलेखा यादवलगायतले बुधबार धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउनुुभएको छ ।
यसअघि उहाँहरू पूर्वमहामन्त्री सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा विभिन्न विषयमा छलफल गरी धर्ना स्थलमा पुुग्नुुभएको हो । नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी, काभ्रेका सभापति मधु आचार्य, धादिङका जिल्ला सभापति रमेश धमला तथा युवा नेता रञ्जित कर्ण र डिल्लीराम सुवेदीलगायत रिले अनशनमा बस्नुुभएको छ । गौरखापत्र दैनिकबाट